City of Vantaa - 20210112_maskisuositus_somali
Waxaa sidoo kale la soo jeedinayaa caruurta dhigata fasalada lixaad inay isticmaalaan gafuur-xirka
Degmada Vantaa waxay soo jeedinaysaa, in sidoo kale caruurta dugsiyada aasaasiga ah ee fasalada lixaad ay iskoolka dhexdiisa isticmaalaan af-daboolka sanka lagu xirto laga bilaabo 13.1.2021. Talo soojeedintani waxay ka timid hay'adda THL bisha kowaad sideedi (8.1.2021) in maalin kasta muwaadiniintu ay isticmaalaan harqadda afka iyo sanka lagu daboosho. Taladan la soojeediyey ee ku saabsan in afka la daboosho waxay hadda taabanaysaa dugsiyada aasaasiga ah ee hoose-dhexe fasaladooda lixaad laga bilaabo.
Ardaydu waxay ka helayaan af-daboolka iskoolka maalin kasta afar xabo oo cusub. Dugsiga ayaa u sheegaya sida loo sida loo qaybinayo af-daboolka. Ardayda ayaa laga rabaa inay iyagu ka taxadiraan inay maalin kasta haystaan af-daboolka inta ku filan. Af-daboolka waxaa wanaagsan in aad ku qaadato bac xiran oo nadiif ah. Ardayda sidoo kale waa loo ogol yahay inay isticmaalaan af-dabool ay iyaga soo iibsadeen oo guryahooda kala yimaadeen, waase haddii ay sidaasi rabaan.
Arintaan dhan waa un talo soojeedin, ee maaha khasab inaad af-daboolka isticmaasho oo xirato. Saas oo ay tahayna waxaan si xoogan usoo jeedinaynaa in af-xirka la isticmaalo, si markaas cudurka Covid-19 saradiisu inay faafto aan si xoog leh u hor istaagno.
Sida loo isticmaalo af-daboolka
Af-daboolka soo xiro ka hor inta aadan iskoolka imaan. Iska badal oo mid cusub xiro, haddii aad mar iska bixisay, ama haddii af-xirku uu kaa qoyo ama wasakh yeesho. Faraha ku dhaqo saabuunta jeermiska disha ka hor inta aadan af-daboolka xiran oo gashan. Af-daboolada la nacay oo la isticmaalay waa in lagu rido meelaha lagu guru qashinka isku-jirka ah. Talooyinkan ardayda iskoolka dhexdiisa ayaa loogu sheegi doonaa oo waa lagala hadli doonaa.
Af-daboolka la xirto sida loo isticmaalo (THL)